သတင်းစုံ – Page2– မြန်မာ့သတင်း
ရာသီသွေးမလာအောင် မိန်းမကိုယ်ကို ခေတ္တပိတ်ထားနိုင်မယ့် ကော်နှုတ်ခမ်းနီ
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်..။ ဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာ…!
မိုက်ရိုင်းချက်… မိန်​ခ​လေးတစ်​​ယောက်​ကို ​ခေါင်​မိုး​ပေါ်​ခေါ်ပီး လူအများ​ရှေ့မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အဓမ္မပြုကျင့် .
ကင်ဂျုံနမ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင် မလေးရှားသတင်းဌာန ထုတ်လွှင့် (ရုပ်သံ)
မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်တဲ့ အရောင်းမိန်းကလေးကို ငွေထုပ်နဲ့ကောက်ပေါက်တဲ့ ဗွီဒီယိုရုပ်သံ နာမည်ကြီး
စကီလေး ပိုချစ်အောင် ဘယ်လိုနေမယ်
ဇာတ်ကားထဲကလိုခပ်ဆန်းဆန်းလိင်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့မတော်တဆမှုတွေကို ကူညီပေးနေရတဲ့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ
လိမ်မော်သီး ၂လုံး ခိုးစားလို့ဆိုတဲ့ စွတ်ဆွဲချက်နဲ့ အတူ ရေနွေး နဲ့လောင်းခံရတဲ့ ၁၄နှစ်ရွယ်ကလေးမလေး
ဆေးလိပ် ကိုတစ်ရက်တစ်လိပ်နှုန်းသောက်လျင်ပင် အသက်တိုနိုင်ခြေ မြင့်မား
ဓါတ်ပုံ	မိုက်ရိုင်းချက်… မိန်​ခ​လေးတစ်​​ယောက်​ကို ​ခေါင်​မိုး​ပေါ်​ခေါ်ပီး…	ဗီဒီယို	ကင်ဂျုံနမ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင် မလေးရှားသတင်းဌာန ထုတ်လွှင့်…	သတင်းစုံ	ဇာတ်ကားထဲကလိုခပ်ဆန်းဆန်းလိင်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့မတော်တဆမှုတွေကို…	သတင်းစုံ	လိမ်မော်သီး ၂လုံး ခိုးစားလို့ဆိုတဲ့ စွတ်ဆွဲချက်နဲ့ အတူ ရေနွေး နဲ့လောင်းခံရတဲ့…	နောက်	ရှေ့ ဗဟုသုတအစုံ
ဗဟုသုတအစုံ	ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်..။…	ဖိုမ သဘာဝ	စကီလေး ပိုချစ်အောင် ဘယ်လိုနေမယ်	ဖိုမ သဘာဝ	ယောက်ျားလေးတွေ… နားထောင်! ခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကလေးတွေ ခနရပ်လို့… ကိုယ့်…	ဗဟုသုတအစုံ	e-စီးကရက် ရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲလို့ သွား(၇)ချောင်း ဆုံးရှုံးပြီး၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရခဲ့သူ	နောက်	ရှေ့ အနုပညာကဏ္ဍ
ဓါတ်ပုံ	Model လောကမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ မြန်မာ Model မလေးပါ။ GYM ကစားထားတာ Body လှတယ်နော်။	ဗီဒီယို	မြန်မာပြည်သိန်းတန်ရဲ့ သီချင်းအသစ် “အမေ့အိမ်”	ဓါတ်ပုံ	အွန်လိုင်းမှာ အရမ်းဟော့နေတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ရွှေမှုံရတီရဲ့အလန်းစားဖက်ရှင်	လူမှုဘဝ
ကျန်းမာရေး	ရာသီသွေးမလာအောင် မိန်းမကိုယ်ကို ခေတ္တပိတ်ထားနိုင်မယ့် ကော်နှုတ်ခမ်းနီ	ကျန်းမာရေး	ဆေးလိပ် ကိုတစ်ရက်တစ်လိပ်နှုန်းသောက်လျင်ပင် အသက်တိုနိုင်ခြေ မြင့်မား	ကျန်းမာရေး	ချိုင်း ချွေးနံ့ပျောက်စေမယ့် အလွယ်ဆုံးနည်း (၃) နည်း	ဖိုမ သဘာဝ
ကျန်းမာရေး	ရာသီသွေးမလာအောင် မိန်းမကိုယ်ကို ခေတ္တပိတ်ထားနိုင်မယ့် ကော်နှုတ်ခမ်းနီ	ဖိုမ သဘာဝ	တကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုပဲ ယောက်ျားလေးတွေလုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့အရာ(၅)ခု	ဖိုမ သဘာဝ	စကီလေး ပိုချစ်အောင် ဘယ်လိုနေမယ်	ဖိုမ သဘာဝ	ယောက်ျားလေးတွေ… နားထောင်! ခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကလေးတွေ ခနရပ်လို့… ကိုယ့်…	နောက်	ရှေ့ ဓါတ်ပုံ
ဓါတ်ပုံ	မိုက်ရိုင်းချက်… မိန်​ခ​လေးတစ်​​ယောက်​ကို ​ခေါင်​မိုး​ပေါ်​ခေါ်ပီး…	ဓါတ်ပုံ	Model လောကမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ မြန်မာ Model မလေးပါ။ GYM ကစားထားတာ Body လှတယ်နော်။	ဓါတ်ပုံ	အွန်လိုင်းမှာ အရမ်းဟော့နေတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ရွှေမှုံရတီရဲ့အလန်းစားဖက်ရှင်	ဗီဒီယို
ဗီဒီယို	ကင်ဂျုံနမ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင် မလေးရှားသတင်းဌာန ထုတ်လွှင့်…	ဗီဒီယို	မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်တဲ့ အရောင်းမိန်းကလေးကို…	ဗီဒီယို	YBS ရဲ့တံခါးဖွင့်ပုံတဲ့ အဆန်းကြီး ကြည့်ကြည့်	ဗီဒီယို	မြန်မာပြည်သိန်းတန်ရဲ့ သီချင်းအသစ် “အမေ့အိမ်”	နောက်	ရှေ့ ဟာသ
ဓါတ်ပုံ	မိုက်ရိုင်းချက်… မိန်​ခ​လေးတစ်​​ယောက်​ကို ​ခေါင်​မိုး​ပေါ်​ခေါ်ပီး လူအများ​ရှေ့မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အဓမ္မပြုကျင့်…	Feb 20, 2017
0	ဗီဒီယို	ကင်ဂျုံနမ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု…	သတင်းစုံ	လိမ်မော်သီး ၂လုံး ခိုးစားလို့ဆိုတဲ့ စွတ်ဆွဲချက်နဲ့…	သတင်းစုံ	ဇာတ်ကားထဲကလိုခပ်ဆန်းဆန်းလိင်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်…	သတင်းစုံ	ယခုအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း ဘဏ်တိုးနှုန်းအပေါ်…	Browsing Category
သတင်းစုံ	ဖန်စားပွဲပေါ်မှာ ချစ်တင်းနှောရင်း ဖန်သားကွဲသွားလို့ အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဇိမ်မယ်	Author	Jan 13, 2017
0	ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့က ဟော်တယ်တစ်ခုမှာ ထိုင်းဇိမ်မယ်တစ်ယောက်ဟာ ဖန်သားကွဲနဲ့ ရှမိတဲ့ဒဏ်ရာ အကြီးအကျယ် ရရှိခဲ့ပြီး အရေးပေါ် ဆေးရုံကို ပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ဇိမ်မယ်ကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က ပျော်ပါးဖို့အတွက် ဟော်တယ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ နိုင်ငံခြားသားဟာ အခြားပြဿနာ ဖြစ်မှာစိုးလို့ တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပါတယ်။…	အပြည့်အစုံကြည့်ရန်...
သတင်းစုံ	ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် တောင်ပေါ်ရှိ…	Author	Jan 13, 2017
0	ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် တောင်ပေါ်ရှိ ရိုးရိုးလေးဟိုတယ် အခန်း (၁၀၆) ခန်းဖျက်သိမ်းမည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၏…	အပြည့်အစုံကြည့်ရန်...
သတင်းစုံ	မသင့်လျော်သောပုံများကို ဗီနိုင်းထုတ်ပါက တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့…	Author	Jan 10, 2017
0	သူမဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ တရားဝင်ကြေညာထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ဇွန်သဉ္ဇာက သူမရဲ့ မသင့်လျော်သော ဓာတ်ပုံများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဗီနိုင်းထုတ်ပါက တရားစွဲမယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်ကနေ…	အပြည့်အစုံကြည့်ရန်...
သတင်းစုံ	လူရိုက်သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လုယူသွားသူကို ၂ နာရီအတွင်း ဖမ်းမိ	Author	Jan 10, 2017
0	By ဒီဗွီဘီ 10 January 2017 ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာမှာ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ နေ့လယ်က စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့…	အပြည့်အစုံကြည့်ရန်...
သတင်းစုံ	ရွှေသာလျောင်းဘုရားပွဲမှာ ဖျော်ဖြေခွင့်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့…	Author	Jan 9, 2017
0	ဧရာဝတီတိုင်း ကြံခင်းပုလိုင်းရွာမှာ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက် အထိ ၃ ရက်ကျင်းပမယ့် ရွှေသာလျောင်းဘုရားပွဲတွင် ပါဝင်ဖျော်ဖြေဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဇွန်သဉ္ဇာကတော့…	အပြည့်အစုံကြည့်ရန်...
သတင်းစုံ	ငါးကြိမ်မြောက်ထွက်ပြေးချိန်ကျမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရတဲ့ IS…	Author	Jan 9, 2017
0	IS တွေရဲ့ လိင်ကျွန်အဖြစ်ကနေ ငါးကြိမ်အထိ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အသက် (18)နှစ်အရွယ် Lamiya Haji Bashar လို့ အမည်ရတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ဆီးရီးယားတရားရုံးမှာ သူမရဲ့…	အပြည့်အစုံကြည့်ရန်...
သတင်းစုံ	သူငယ်ချင်း အိမ်အလည်သွားရာမှသူငယ်ချင်းညီမအား သားမယား…	Author	Jan 9, 2017
0	ကချင်ပြည်နယ်၊မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ဆားမော်ကျေးရွာ၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တွင်တစ်ရပ်ကွက်ထဲနေသူသူငယ်ချင်း၏အိမ်သို့အလည်သွားရာမှအိမ်တွင်တစ်ဦးတည်းရှိနေသောသူငယ်ချင်း၏ညီမအား…	အပြည့်အစုံကြည့်ရန်...
အသစ်များ ADVERTISEMENT!	Hot
ဓါတ်ပုံ	မိုက်ရိုင်းချက်… မိန်​ခ​လေးတစ်​​ယောက်​ကို…	ဖိုမ သဘာဝ	ခန္ဓာကိုယ်ရမှ ချစ်မယ် ဆိုတဲ့ ယောက်ျားမျိုးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ…	ဓါတ်ပုံ	Model လောကမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ မြန်မာ Model မလေးပါ။ GYM…	သတင်းစုံ	ဇာတ်ကားထဲကလိုခပ်ဆန်းဆန်းလိင်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်…	ဗီဒီယို	မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်တဲ့…	ဗီဒီယို	YBS ရဲ့တံခါးဖွင့်ပုံတဲ့ အဆန်းကြီး ကြည့်ကြည့်	ခေတ္တစောင့်ပါ ...	ပိုမိုကြည့်ရှုရန်	နောက်ထပ်ကြည့်ရန်မရှိတော့ပါ... ADVERTISEMENT!
FacebookJoin us on FacebookGoogle+Join us on GoogleYoutubeJoin us on YoutubeRSSSubscribe our RSS	Facebook Page	118k
ကဏ္ဍအလိုက်	ကျန်းမာရေး 3
ဖိုမ သဘာဝ 5
မြန်မာ့သတင်းသည် အကျိုးပြု ဆောင်းပါးများဖြစ်သော
နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေသည့် ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Copyright © 2015 - 2017 MyanmaThaDin All Rights Reserved.	News and Enteratinment